Heerka 5 Qufulka ee Ireland: Waa maxay macnaheedu?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Irland News Breaking News » Heerka 5 Qufulka ee Ireland: Waa maxay macnaheedu?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Irland News Breaking News • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ireland waxay ku dhowdahay inay gasho Heerka 5 Lockdown, maxaa si wax ku ool ah uga dhigan ku dhowaad mamnuuc safar oo dhameystiran.
Guddi-hoosaadkii golaha wasiirrada ee Irish ee shirkii 'Covid-19' ayaa dhammaaday, iyadoo Wasiiraduna ay ku taliyeen in lagu daro kordhinta Heerka 5 illaa 5-ta Maarso.
Soo jeedinta xaddidaadda safarka cusub ayaa sidoo kale la keeni doonaa kulanka berri ee buuxa ee Golaha Wasiirrada, laakiin waxaa la fahansan yahay in aan wax go’aan ah laga gaarin Ceymiska Ka-tagidda ama ku noqoshada waxbarashadda, toddobaadka soo socda.
Goobaha dhismaha, marka laga reebo kuwa hadda loo oggol yahay inay shaqeeyaan, way xirnaan doonaan illaa iyo 5-ta Maarso.
Guddi-hoosaadka Golaha Wasiirrada ee Covid ayaa isku raacay in dhammaan kuwa ka imanaya Koonfur Afrika iyo Brazil ee laga helay noocyada 'Covid variants' ay la kulmi doonaan karantiil qasab ah marka ay dalka soo galayaan.
Mid ka mid ah ilo-wareedyada ayaa sheegay in tani ay si wax ku ool ah ugu dhigmi karto xayiraadda socdaalka ee dalal gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa la fahamsan yahay in tani ay qaadan karto waqti in lagu dhaqangaliyo maadaama qabanqaabada ay tahay in lala sameeyo hudheelada.
Rakaabka ka soo galaya gobolada kale waxaa laga filayaa inay is karantiilaan oo tanina waxay hadda noqon doontaa "sharci ku qabasho iyo ciqaab" mana sii ahaan doonto la-talin sidii horeba.
Waxaa la fahamsan yahay in Wasiiradu sidoo kale ka wada hadleen suurtagalnimada in dadka la tijaabiyo markay yimaadaan garoomada diyaaradaha iyo sidoo kale inay u baahan yihiin baaritaanka PCR ka hor safarka.
Tirada tilaabooyinka cusub ee lagu xakameynayo faafitaanka viruska ee u gudbi doona Golaha Wasiirada berri, waxaa ka mid ah:
Isbaarooyinka Garda ayaa laga sameyn doonaa banaanka garoomada diyaaradaha iyo dekedaha si loo joojiyo safarka aan muhiimka aheyn, iyadoo la kordhin doono ganaaxyada kuwa tagaya ujeedooyin aan muhiim aheyn - oo ay kujirto ganaax koror ah oo ka badan € 100 oo hada lagu hayo. Waxaa la fahansan yahay in tan lagu kordhin karo € 250. Isbaarooyinka ayaa sidoo kale hubin doona soo laabashada dalxiisayaasha.
Karantiil huteel qasab ah oo loogu talagalay dhammaan dadka ka imanaya Koonfur Afrika iyo Brazil ugu yaraan shan iyo illaa 14 maalmood hudheel dawladdu u qoondeysay haddii ay tijaabiyaan wax wanaagsan maalinta shanaad. Dhamaan karantiillada qasabka ah waxay ku jiri doonaan kharashka socdaalka.
Soo bandhigida cunaqabateyn aad u adag oo ku saabsan jebinta sharciga shanta kilomitir ah si loo joojiyo dadka duulaya. Tan waxaa ku jiri doona ganaaxyo kuwa isku daya inay dibedda u aadaan sababo aan muhiim ahayn.
Karantiil huteel oo qasab ah muddo 14 maalmood ah iyo sidoo kale ganaax gaaraya € 2,500 ama ilaa lix bilood oo xabsi ah oo loogu talagalay dadka imanaya waddanka ee aan haysan baaritaanka PCR-ga ee xun si wax looga qabto daldaloolada u oggolaaday mas'uuliyiinta inay ciqaabaan dadka, laakiin maaha si loo joojiyo inay soo galaan gobolka.
Joojin kumeelgaar ah dhammaan safarka muddada-fiisaha-fiisada-la'aanta ah ee loogu talagalay kuwa ka imanaya Koonfur Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
Tijaabinta Antigen ee meelaha adeegyada wadada weyn ee u dhow Dublin Port iyo Rosslare oo loogu talagalay dhibbanayaasha u safraya Faransiiska laga bilaabo Khamiista.
Xoojinta foomka soo-helitaanka rakaabka iyadoo la weydiinayo su'aalo badan iyo dabagal badan kadib marka uu qofku yimaado waddanka, iyo sidoo kale ganaaxyo cusub oo ku saabsan jebinta foomka.